Dhalada Shiinaha ee Jumladaha Layaabka ah ee Jumladaha Dhalaanka ah Oo Jaban Oo Tayo Weyn Karta Atomizer 5ml warshadleyda iyo soosaarayaasha | Waligaa Iftiin
Wax ka qabashada dusha sare:
PUMP SPRAYER, Mashiinka buufiyaha caaga
Matte ama dhalaalaya
Midab kala duwan oo kujira kaarka panetone
Farxad, dib loo sheegi karo
Tijaabiyay Guddiyada SGS iyo BV, iyagoo u hoggaansamaya heerka EU
Wax soo saar Dhalada Kariimka ah ee Dhalada Kariimka ah Oo La Siisan Yahay Nooca PA022
Awoodda 5ml, 8ml Cabirid
Midab Madow, Qalin, Casaan, Buluug, Casaan, Khafiif, Dahab dahab ah, iwm Dhamaadka dusha kore Matt ama dhalaalaya
Qalabka Dhalada Aluminiumka Birta Ka Soo Weerata + Dhalada dhalada ku jirta Daabacaadda Logo Xariir xariir, silsilado dhalaalaya, xaraashka fudud, Emboss iwm
Nooca calaamadaynta Kala firidhso daboolka xirashada / Nooca qallooca MOQ 5000 Piece
Codsi Is qurxinta, daryeelka maalinlaha ah, cadarka, saliidaha lama huraanka ah, dawo, kiimiko iwm. Shahaadooyinka Saldhigga wadajirka ah ee SGS iyo BV, u hoggaansanaanta heerka EU.
Jinsiga Haweenka, Ragga, Gabdhaha, Wiilasha Xidhmada Boorso, boorso yar, kaar khariirad, jeex jeexan, iwm
HS code 9616100000 Dekadda Ningbo / Shanghai
Waxaa jira faahfaahin dheeraad ah. Haddii aad rabto inaad ogaato macluumaad dheeraad ah, waad gujin kartaa “Dir” si aad noola soo xiriirto. Isla mar ahaantaana, waxaad booqan kartaa websaydhka: https://ebi.en.alibaba.com
EBI waa soo saare xirfad-yaqaan ah ee dhalooyinka aluminiumka dib loo isticmaali karo, gasacadaha aluminiumka ah, tuubooyinka aluminiumka iyo baakadaha kale ee aluminiumka loogu talagalay cuntada & cabbitaanka, qurxinta, daryeelka timaha, daawooyinka, guryaha iyo waxsoosaarka warshadaha.
S: Miyaad sameyn kartaa qaabeynta iyo cabirka guud?
A: Haa, adeegga ODM & OEM waa la heli karaa. Waxaan u qaabayn karnaa cabirka iyo qaabeynta ama xitaa qaabka dhalada.
S: Nooc noocee ah oo la naqshadeeyay ayaad sameyn kartaa?
A: Silkscreen: 1-3 midabyo fudud
Daabacaadda kuleylka: 1-8 midabbada astaanta adag
Daabacaadda daabacaadda: 1-9 astaanta astaanta
S: Mudo intee leeg ayaan heli karaa xoogaa muunad ah?
A: Saamiyada saamiyada waa bilaash. Waqtiga hogaaminta: 2-3 maalmood.
Saamiyadaha la diyaarshay: qiyaastii 7-10 maalmood.
S: Muddo intee le'eg ayay tahay wakhtiga soosaarkaagu?
A: Alaabada waxaa lagu dhamayn doonaa 25-35 maalmood kadib markii muunadda la xaqiijiyay.
A: MOQ our waa 3,000-10,000pcs, waxay kuxirantahay badeecada aad ubaahantahay.
S: Sidee ku saabsan shuruudaha bixinta?
A: Lacag yar: PayPal, Western Union, Cash.
Qadar aad u badan: T / T, dammaanadda ganacsiga Alibaba, L / C, DP iyo OA.
Xiga: Tubada Aluminiumka ah ee loo yaqaan 'Aluminium tube' horay loogu ridi lahaa weelka baakada iskuxiran
Dhalooyinka Caarada ah ee Dhalada ah ee Atomizer
8ml 10ml 12ml Pocket Portab Madoow oo Tayo Sare leh ...